Ma Qabsoomaysaa Doorashada Madaxtooyadu Mise Ma-Qabsoomayso?!!- Xasan Xuseen Badmaax | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Ma Qabsoomaysaa Doorashada Madaxtooyadu Mise Ma-Qabsoomayso?!!- Xasan Xuseen Badmaax
Ma Qabsoomaysaa Doorashada Madaxtooyadu Mise Ma-Qabsoomayso?!!- Xasan Xuseen Badmaax
FoorenewsOct 15, 2016Aragtida Dadweynaha, wararka0
Dalkan JSL waxuu leeyahay dastuur loogu talo galay in ummada lagu hogaamiyo,laguna dhaqo balse dawladahii isaga danbeeyay hogaaminta dalka tan iyo intii aynu la soo noqonay xornimada marnaba may suurta gelin doorashooyinka madaxtooyada in lagu qabto waqtigeeda. Hogaan kasta oo loo doorto hogaaminta dalka waxa ku waajib ah inuu inuu ilaaliyo,kuna hago dalka dastuurka inoo yaala.Waxa ku waajib ah inuu guntado muddada loo doortay kursiga dalka ugu sareeya inay ku egtahay 5sanno sida ku cad qodobkan dastooriga ah:
QODOBKA 88AAD: MUDDADA XILKA
1. Muddada xiIka ee Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha waa 5 sano oo ka bilaabanta maalinta xilka loo dhaariyo. Mar hadii dastuurku cadeeyay muddada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa waxa ku waajib ah muddadaa dhexdeeda in lagu diyaariyo wax kasta oo ay u baahantay qabashada doorashada cidii iyaga bedeli lahayd. Sidaana waxa ku ilaalinaya golaha xeer-dejinta iyo xisbiyada mucaaridka ah. Marnaba lama fulin qodobkan,taasina waxay ku tusaysaa waxii ka baxsan ama lagu kordhiyo 5taa sanno ee dastuurku u cayimay inay xaaraan tahay.Halkaa waxa inoogu cadaatay weligeenba inaynu sharci darro isku raacnay oo jebinay dastuurkii inoo dhaxeeyay ee ay ahayd in la dhaqan geliyo. Waxaynu qiil ka dhiganaa mar kasta oo ay muddada 5ta sanno dhamaatabo lacag ayaan lahayn,nidaamkii doorashada ayaa kala dhiman, dawladahii innaga taakulayn jiray doorashooyinka ayaan waxba laga hayn. Waa sababo laga yaq-yaqsoodo in lagu jebiyo dastuurka dalka u yaal,waxaanay ka markhaati kacaysaa laba arrimood:
1. Daacad Darro.
2. Kursi Jacayl.
Waxaynu wada ognahay xeer kasta oo ka hor yimaada dastuurka inuu yahay waxba kama jiraan,sidaa darteed kordhin kasta oo hore u soo qabsoontay waxay ka soo hor jeeday dastuurka sida qodobkan dastuuriga ahi dhigayo:
QODOBKA 128AAD: SALDHIGGA IYO SARRAYNTA DASTUURKA
1. Dastuurka waxa saldhig u ah mabaadi’da Islaamka.
2. Dastuurka ayaa ugu sarreeya xeerarka dalka, xeer kasta oo aan isaga waafaqsanaynina, waxa uu noqonayaa waxba kama-jiraan.
Hadaba markay kordhin oo dhami baal marsantahay dastuurka,maantana mar hadii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisuba hogaamintoodu ay dhaaftay 5tii sanno ee xilka loo igmaday, kuma fadhiyaan sharci. Sidaana waxa u baneeyay golaha guurtida oo jebisay axdigii ummadu isku raacday, ahna dastuurka. Waxa kale oo lama dhaafaan ah dhaarta madaxweynaha lagu dhaariyo inuu daacad u noqonayo diinta islaamka,dadka iyo dalka ku hogaamiyo cadaalad iyo sinnaansho sida qodobkan dastuuriga ahi dhigayo:
Guddoomiyaha Maxamadda Sare oo isla markaana ah Guddoomiyaha Maxamadda Dastuuriga ah ayaa dhaarinaya cid kasta oo Dastuurku ku waajibiyey dhaartan Dastuuriga ah, ka hor inta aanu xilkiisa bilaabin; sidoo kale waxaa isagana dhaarinaya Madaxweynaha.
Markay sidaa tahay nahayna dad muslimiin ah waxa waajib ah dastuurka,muddada xilka iyo hawlaha lagu dhaartay in sidooda loo fuliyo.Balse dhawrkii jeer ee doorasho dalka laga soo qabtay iyo tan aynu sugayno-ba midnaba looma fulin sida ku cad qodobada aan kor xusay.
Akhristayaal, fulin la’aanta dastuurka iyo dhaartu waxay ka markhaati kacayaan in laga door bidayo lana danay-naayo hadba damaca siyaasadeed ee ay ku legdamayaan siyaasiyiinta kursiga u tartamaya. Sidaa darteed anigu waxay aragtidaydu tahay doorashadu inaanay ku qabsoomayn 28/10/2017, weli waxaynu ku taaganahay ku-dhaqan la’aanta dastuurka,waxaana kuu cadaynaya sharci darrada lagu kala reebay labadii doorasho ee isbarkanaa.Waayo, madaxweyne Axmed-siiraanyo isagoo ayiday go’aankii hore ee maxkamada ayuu ayuu hadana gocda inuu iskii u kala qaado labadii doorasho,maxkamadana ka codsaday inay beeniyaan go’aankoodii hore. Dhinaca kale khilaafkii xisbiga oo aan weli la soo afjarin ayadoo doorashadii ka hadhsantahay 5 bilood. Xisbiga Wadani xeer Nr.14/2011 farayo inuu shir weyne qabsado,kaas lagu dooran doono golahii dhexe iyo dhismaha xisbiga. Komishanka oo aan isna ilaa hada technically aan diyaarin hawlahii,mashiinadii samayn lahaa kaadhka codbixiyaha iyo aduunkii lagu fulin lahaa. Akhristayaal, doorashada madaxtooyadu sidaan filayo kuma qabsoomayso waqtigii loo qoondeeyay, garan maayo goorta Alle (SWT) u doori doono dalkan madax daacad dadka iyo dalkaba u ah, dhowran oo ku fuliya doorashooyinka muddada dastuurku u cayimay.
Previous PostMadaxweynaha Nigeria Oo Xaaskiisa Ku Amray Inay Maamulka Gurigeeda Ku Ekaato Oo Aanay Siyaasadda Faro Galin Next PostMadax Dhaqameed Ka Soo Jeeda Gobolka Hawd Oo Ka Hadlay Cida Lagu Wareejinayo Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka Ah Ee Waddani